Submit Employee Info isiZulu
SARS Home > Client Segments > Businesses and Employers > My Business and Tax > Submit Employee Info isiZulu
​IMIYALEZO YENQUBEKO EKUBHALISWENI KOMTHAMO WENTELANGENISO ISIYATHOLAKALA MANJE
Abaqashi sebengakwazi ukuthola Imiyalezo Yenqubeko mayelana nokuBhaliswa Komthamo WeNtelaNgeniso (i-ITREG), okumanje sebezokwazi ukuthola izinombolonkomba zeNtelangeniso zalabo basebenzi u-SARS akwazile ukubabhalisa ngempumelelo esebenzisa Isidalulo SokuLinganisa Sabaqashi (i-EMP501) ebesilethwe kuye.
Umthamo we-ITREG uyazenzekela, kabili ngonyaka, ngemva kwezithuba zokulinganisa zabaqashi zonyaka nezesikhashana. Lapho umqashi eletha i-EMP501 yakhe yonyaka kumbe yesikhashana uhlelo lokubhaliswa kwabasebenzi abangayibhalisele Intelangeniso lube selwenziwa.
Isu-ngqangi: Umthamo we-ITREG udinga ukuba kugcinwe uhlu lwemininingwane lohlelo lwe-inthanethi [email protected]™ Employer obelusetshenziswe ngesikhathi kwethulwa izilinganiso. Lapho kusetshenziswe uhlu olwahlukile, abaqashi ngeke bakwazi ukuthola izinombolonkomba zentelangeniso zabasebenzi ababhalisiwe. Esimweni esinjalo, uhlelo lolu luzokwakha imiyalezo eluleka ukuthi izitifiketi zekolinganisa okwedlule kazitholakali.
Ukuthola Izinombolo zeNtelangeniso ku- [email protected]™ Employer
Ukuze uthole izinombolonkomba zeNtelangeniso, feza lezi zigaba ezilandelayo:
Isigaba 1: Uma udidiyela, qinisekisa ukuthi usebenzisa uhlelo lwe- [email protected]™ Employer kuthi yonke imininingwane yakho iqukathe ukulinganisa kwakho kwakamuva ukuze kuxhumane.
Isigaba 2: Qalisa [email protected]™ Employer, faka imininingwane yakho yokungena kwi- [email protected]™ Employer
Isigaba 3: Qoka inkampani; uzothola umyalezo wokuthi le nkampani oyiqokile isingumqashi ovuliwe.
Isigaba 4: Qoka u- synchronise “All”, uma usuke wakwenza lokhu phambilini ungakhetha ukudidiyela kuphela imiphumela yokubhalisa ngokuqoka u- “Taxpayer Income Tax Registrations”
Isigaba 5: Faka imininingwane yakho yokungena kwi-eFiling. Uma sekuphothuliwe ukudidiyela, umyalezwana othushukayo uzovela ekhoneni ngakwesokunene ezansi ukuqinisekisa ukuba imiphumela isitholakele.
Isigaba 6: Qoka Isikhungo Sezaziso se- [email protected]™ Employer bese uvula incwadi yesaziso se-ITREG evela ebhokisini lenkampani.
Isigaba 7: Imiphumela izozibuyekezela yona amarekhodi omqashi achonywe ohlwini lwenkampani lolwazi. Ukubuka imiphumela yakho ye-ITREG, qoka u-“View/Edit Employees”
Umyalezo obuyayo wemiphumela yokubhalisa
Uma usuphothule i- ITREG [email protected]™ Employer, u-SARS uzokuthumelela umyalezo wezaziso eSikhungweni Sezaziso [email protected]™ Employer, lo myalezo uzokuhlinzeka ngesifinyezo semiphumela yezicelo zokubhalisa. Imiphumela lena ingabhekwa futhi ku-“View/Edit Employees” okutholakala kwi- [email protected]™ Employer lapho u-SARS ezokuhlinzeka ngombiko wokuqhubekayo mayelana nabasebenzi abangabhalisekanga kanye nezizathu zokungabhaliswa kwalabo basebenzi.
Imiphumela ye-ITREG ungayithuthela kwifayela le-CSV nelingasetshenziselwa ukubuyekeza izicelo zezokuholela ngokuzenzakalelayo. Lolu hlelo lungatholakala ngokuqoka u- “Import/Export Payroll File” bese uqoka futhi ikhethelo lika-“Export”. Ngeminye imininingwane bheka umhlahlandelela wethu [email protected]™ Employer user guide.
Isu-ngqangi: Kulijoka lomqashi ukuqinisekisa ukuphusa kahle kwemininingwane ayihlinzeka abakwa-SARS lapho eyiletha kubo.
Ngeminye iminingwane ngohlelo lokubhalisela abasebenzi Intelangeniso shayela i-Contact Centre yakwa-SARS ku--0800 00 (SARS) 7277 kumbe uvakashele igatsha lakwa-SARS eliseduze nawe.
Last Updated: 20/07/2016 2:39 PM ​